သကျတနျ့ခြို: May 2012
ဖေ့ဘုတ်မှ ပုံမမြင်ရသူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု
၂ ရက်ရှိပြီ ပုံတွေမမြင်ရတာ Facebook Server Error ကြောင့်ပဲ ထင်နေမိတယ် ။ သေချာပြန်ကြည့်တော့မှ mpt တစ်ခု တည်းဖြစ်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ တစ်ခုခု error တက်တာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဖေ့ ဘုတ်က ပုံတွေမမြင်ရသူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အနက်က
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး နဲ့အဆင်ပြေအလွယ်ကူဆုံးနည်းကိုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ အောက်မှာပေး ထားတဲ့ အဆင့် အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ ။
၁ ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်က ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ ။ Zip file နဲ့တင်ပေးထားပါတယ် .exe ဆိုရင် virus ဆိုပြီး Upload server တွေက ဘမ်းပစ်လိုက်ကြလို့ပါ ။ (Version 11.02 ပဲတင်ပေးထားပါတယ် Update တွေ လည်းရှိပါတယ် နောက်ပိုင်းသုံးရင်းနဲ့ သူ့ဘာသာသူ Update version ရပြီ ဒေါင်းမလားမေးရင် Ok or Yes လုပ်ရင် update ရလာပါလိမ့်မယ် )
Mediafire Link - http://www.mediafire.com/?9zoqc81b4d08rn2
4Share Link - http://www.4shared.com/rar/McBeb-Ok/U1102.html
မှတ်ချက် ။ ။ Google မှာ ရှာပြီးလည်း Download လုပ်သွားနိုင်ပါတယ် ။
၂ ။ Double Click နှိပ်ပြီး သူ့ကို run လိုက်ပါ ။ ခဏလောက်ကြာ တဲ့အခါ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Successfully connected to the server ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
၃ ။ ချက်ချင်းပဲ IE browser လည်းပေါ် လာပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ်က IE သုံးနေတာဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက်သုံး ယုံပါပဲ ။ မဟုတ်ပဲနဲ့ Firefox သို့မ ဟုတ် တခြား browser သုံးနေတာဆိုရင်တော့ အဲဒီပေါ်လာတဲ့ IE browser ကိုပိတ်လိုက်ပါ ။
၄ ။ ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Browser ထဲက Tools>Options>Advanced>Network>Setting > ဆိုပြီးအ ဆင့်ဆင့်သွားပါ ။
၅ ။ ပြီးတဲ့အ ခါ Manual Proxy Configuration ကိုရွေးပါ ။ ပြီးရင် Http proxy နေရာမှာ 127.0.0.1 လို့ရိုက်ပြီး Port နေရာမှာ 9666 လို့ရိုက်ပါ ။
၆ ။ ပြီးရင် Use this proxy server for all protocols ကို အမှန်ခြစ်ပြီး ။ ပြီးရင် Ok တွေနှိပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ ။
ဒါဆို ဖေ့ဘုတ်က ပုံတွေအကုန်လုံးပြန်မြင်ရပါပြီ ( မှတ်ချက် - ဒီနည်းလေးက အကုန်လုံးကျော် ခွလို့ရတဲ့ နည်းဖြစ် လို့ တခြား မမှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေမှာမသုံးစေချင်ပါဘူး ပိတ်ထားတဲ့ဆိုက်မှန်သမျှ အကုန်ပွင့်ပြီး အကျိုးရှိ မယ့် အရာတွေပဲ ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ )
Posted by သက်တန့်ချို at 12:14 PM No comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:16 AM No comments:
ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တဲ့ ထူးဆန်းဖွယ်ဥ ကို Shuangzhong မြို့မှာ ပြသထားပါတယ် ။ တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း jiangxi စီရင်စုမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေ ၂၇ ရက်နေ့က ပြသထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဥကို ရောင်ရမ်းတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ ကြက်မ တစ်ကောင်က ဥထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဥမှာပါတဲ့အမြီးအရှည်က ၃-၅ စင်တီမီတာလောက်ရှိတယ်လို့ ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ် ။
မူရင်း - A deformed egg is displayed in Shuangzhong town, East China's Jiangxi province, May 27, 2012. The bizarre shaped egg, produced laid byahen was suffering inflammation, hasa3.5-centemeter tail. (Photo Source: chinanews.com)
ှLink - http://news.xinhuanet.com/english/photo/2012-05/30/c_131620018.htm
Posted by သက်တန့်ချို at 9:59 AM 1 comment:
၁ ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ကွယ်ရာမှာ အုပ်စုလိုက် အတင်းတုပ်ပြီး အပုပ်ချ အကြောင်းမ ရှိအကြောင်း ရှာ နှိမ့်ချ ပြောတတ်သူ ။
၂ ။ သူတပါးပျက်ဆီးရာပျက်ဆီးကြောင်း မဟုတ်မမှန် သတင်းလွှင့် ၊ အတင်းအဖျင်းပြောတတ်သူ ။
၃ ။ သူတပါးအပေါ်တွင် အမြဲ အနိုင်ယူလိုချင်နေသူ ။ သူတပါးမျက်ရည်စက်လက်အရှုံးကြီးရှုံးနိမ့်မှုအပေါ်တွင် ၀မ်းသာ အားရ အောင်ပွဲခံနိုင်သူ ။
၄ ။ ကိုယ့်လက်အောင်ငယ်သားအပေါ်တွင် ညှာတာမှုမရှိပဲ အမြဲလိုလို အကာအကွယ်မပေးပဲ ကိုယ်လွတ်ရုန်း၍ ကိုယ့်အ တွက်သာကြည့်တတ်သူ ။
၅ ။ နေရာတကာလူတတ်ကြီးလုပ်၍ မိမိသာလျှင် ပညာတွေပြည့်ဝနေသူ မိမိသာလျှင် အသိဆုံးအတတ်ဆုံးဟု မာန်မာ နထောင်လွှား၍ မောက်မာတတ်သူ ။
၆ ။ မိဘ စည်းစိမ်အပေါ်တွင် သာယာယစ်မူးနေပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အရည်အချင်းနှင့် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရှာနိုင်ပဲ အထက်စီးမှ အမြဲနေချင်နေသူ ။
၇ ။ ကားပေါ်ရောက်သည်နှင့် လမ်းလျှောက်နေသူများ အကြောင်းမသိသူ ၊ လေယဉ်ပေါ်ရောက် သည်နှင့် မြေ ကြီးပေါ်က လူတွေအကြောင်းမသိသူ ၊ ချမ်းသာသွားသည်နှင့် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ များကိုမေ့ သွားပြီးအောက်ခြေ လွတ်သူ ။
၈ ။ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက် - ရေနစ်ရာ ၀ါးကူထိုး အမြဲလုပ်တတ်သူ ။
၉ ။ တစ်ခုခုဆိုလျှင် မှန်သည်မှားသည်မစဉ်းစားပဲ “ ငါလည်းဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းလိုက်မယ် ” လို့ တွေးပြီး လူအ များနှင့်ရောနှောလုပ်ဆောင်တတ်သူ ။ ( ပြင်ပလောက ၊ ဖေ့ဘုတ် နှင့် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ထိုလူများရှိသည်)
၁၀ ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မည်သည့်အရည်အချင်းမှ မရှိပဲ သူတပါး အောင်မြင်မှုအား မုဒိတာ မပွားနိုင်သူ မနာလို မရှူစိမ့်ဖြစ်ပြီး ဒေါသပွားနေသူ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:50 AM No comments:
တစ်ခါတုန်းက စာသင်ခန်းထဲမှာ ဖရော်ဖက်ဆာတစ်ဦးက ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲ ရေ အချို့ထည့်ပြီးမတ် တပ်ရပ် လိုက်တယ် ။ သူက ကျောင်းသားအားလုံးမြင်ရအောင်ဖန်ခွက်ကို ကိုင်မြှောက်ပြ လိုက်ပြီး ကျောင်းသားတွေ ကိုမေး လိုက်တယ် ။
“ ဒီဖန်ခွက်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ထင်လဲ ”
“ ငါးဆယ်ဂရမ် ”.....“ ၁၀၀ ဂရမ် ”....“ ၁၂၅ ဂရမ် ”.. ကျောင်းသားတွေကပြန်ဖြေကြတယ် ။
“ ဒီဖန်ခွက်ကို ချိန်မကြည့်ပဲနဲ့ ဆရာ တိတိကျကျမသိနိုင်ဘူး ” ဖရော်ဖက်ဆာကပြောတယ် ။ “ဒါပေမယ့် ဆရာမေးချင်တာက ဒီဖန်ခွက်ကို ဒီအတိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်ကိုင်ထားရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ”
“ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ” ကျောင်းသားတွေကပြန်ဖြေတယ် ။
“ ကောင်းပြီ ဒါဆို ဒီဖန်ခွက်ကို တစ်နာရီလောက် ဒီအတိုင်း ကိုင်ထားရင်ရော ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ” ပရော်ဖက်ဆာက ထပ်မေးတယ် ။
“ ဆရာ့လက်မောင်း နာလာပါလိမ့်မယ် ” ကျောင်းသာတွေထဲက တစ်ယောက်က ဖြေယတ် ။
“ မင်းမှန်တယ် ကဲ ဒါဆို ဒီအတိုင်း တစ်ရက်လောက်ကိုင်ထားရင်ရော ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ”
“ ဆရာ့လက် ထုံကျင်လာမယ် ကြွက်သားတွေ နာလာ မယ် တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ် သွား မယ် ပြီးတော့ ဆေးရုံသွားရမှာ ကြိမ်းသေပဲ ”
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အရဲစွန့်ပြီးပြောတယ် ။ တခြားကျောင်းသားတွေက ၀ိုင်းရယ်ကြတယ် ။
“ အရမ်းကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် အခုလို လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ဖန်ခွက်ရဲ့အလေးချိန်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သလား ” ပရော်ဖက်ဆာကဆက်မေးတယ် ။
“ မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး ” လို့ ၀ိုင်းဖြေကြတယ် ။
“ ဒါဆို ဘာလို့ လက်တွေနာကြီးကြွက်သားတွေထုံကျင်တာတွေဖြစ်လာရတာလဲ ”
ကျောင်းသားတွေအားလုံးမဖြေနိုင်ပဲ အကြံအိုက်သွားကြတယ် ။
“ ဒါဆို အခု လို နာကျင်တာတွေက သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ ” ပရော်ဖက်ဆာက ထပ်မေးတယ် ။
“ ဖန်ခွက်ကို လွှတ်ချလိုက် ” ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကဖြေတယ် ။
“ အမှန်ကန်ဆုံးပဲ ” ပရော်ဖက်ဆာက ဆက်ပြောတယ် ။
“ ဘ၀ရဲ့ ပြဿနာတွေဆိုတာ အခုသင်ခန်းစာနဲ့အတူတူပဲ ဦးခေါင်းထဲကို ပြဿနာတွေ မိနစ်အနည်း ငယ်လောက် ထည့်ထားလိုက် အိုကေသွားလိမ့်မယ် ပြဿနာတွေကို အကြာကြီးတွေးနေရင်တော့ စတင်ပြီးခေါင်း ကိုက်လာလိမ့်မယ် ။ ”
“ ဘ၀မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြဿနာတွေ ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ ဒါပေမယ့် အဲဒါထက်အရေးကြီးတာကတော့ - - သင်အိပ်ရာမ၀င်ခင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကို လွှတ်ချ လိုက်ဖို့ပဲ ”
စိတ်ဖိစီးမှုမရှိပဲ နိုးထလာတဲ့မနက်ခင်းဟာ လန်းဆန်းပြီး ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းနေလိမ့်မယ် ။ ဘယ်လိုပြဿနာ မျိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်းရှာဖွေရင်ဆိုင်နိုင်တယ် ”
Put the glass down today အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
မူရင်း - The Professor began his class by holding upaglass with some water in it. He held it up for all to see & asked the students “How much do you think this glass weighs?"
Posted by သက်တန့်ချို at 1:05 PM3comments:
တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့အမေညနေစာ ပြင်နေတုန်းမှာ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်လာခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ သူရေးထားတဲ့ စာရွက်အပိုင်းအစလေးကို သူ့အမေလက်ထဲပေးလိုက်တယ် ။ သူ့မိခင်က ရင်ဘတ်ရှေ့ ဖုံးကို ချွတ်လိုက်ပြီး လက်ဆေးလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ကောင်လေးလက်ထဲကစာရွက်လေးကို ဖတ်လိုက်တယ် ။ စာထဲမှာရေးထားတာက
မြတ်ရိတ်ခ - ၅ ဒေါ်လာ
တစ်ပတ်အတွင်း အိမ်သန့်ရှင်းခ - ၁ ဒေါ်လာ
အမေ့အတွက် စတိုးဆိုင်သွားပေးခ - ၁ ဒေါ်လာ
အမေဈေးဝယ်ထွက်နေချိန် ညီလေးအားထိမ်းပေးခ - ၂ ဒေါ်လာ
အမှိုက်သိမ်းခ- ၂ ဒေါ်လာ
ကျောင်းတွင် အမှတ်တက်လာအောင် ကြိုးစားခ - ၅ ဒေါ်လာ
ခြံဝင်းအတွင်းအပြင်သန့်ရှင်းခ - ၂ ဒေါ်လာ
မိခင်က ကောင်လေးကို မတ်တပ်ရပ်နေရာကနေပြီးလှမ်းကြည့်တယ် ။ ပြီးတော့ ဘောပင်ယူလိုက်ပြီး စာရွက်နောက်ကျောမှာ ပြန်ရေးပေးခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ကောင်လေးကို ပေးဖတ်တယ် ။ စာထဲမှာရေးထားတာက
ကိုးလလုံးလုံး ၀မ်းဗိုက်ထဲ နေပြီး စောင့်ရှောက်ခ - ၀ ဒေါ်လာ
ညတိုင်းလိုလို အတူအိပ်ပြီး စောင့်ရှောက် ဆုတောင်းခ - ၀ ဒေါ်လာ
နှစ်ပေါင်းများစွာ အမေကို ဂျီကျ စိတ်ညစ်မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်ခ - ၀ ဒေါ်လာ
သားအတွက် နေ့စဉ် ညစဉ် စိုးရိမ်ပူပန်နေခ - ၀ ဒေါ်လာ
အရုပ်များ ၊ အစားအစာများ ၊ အ၀တ်အစားများ ၀ယ်ပေးခ - ၀ ဒေါ်လာ
အမေ သားအပေါ်ထား သည့် အချစ် များအတွက် - ၀ ဒေါ်လာ
ကောင်းလေက မိခင်ရေးထားတဲ့စာရွက်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ သူ့ မိခင်ဆီလျှောက်သွားပြီးပြောတယ် “ အမေ- - အမေ့ကို သား အရမ်းချစ်တယ် ” ပြီးတော့ ဘော ပင်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီး သူရေးခဲ့တဲ့စာအောက်မှာ စာတစ်ကြောင်းထပ်ရေးလိုက်တယ် ။
“ ငွေပေးချေပြီး ”
သင် မိဘ မဖြစ်သေးသရွေ့ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အလုံးစုံ အပြည့်အ၀ နားမ လည်နိုင်ပါဘူး ။ ငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရသလို ဘယ်အလို အရာနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်လို့မရနိုင်တာဟာ မိခင်မေတ္တာပါပဲ ။
ငွေကြေးဆိုတာကလည်း ပျော်ရွှင်မှုကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ အညံ့ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ။ အေးမြဖြူ စင်တဲ့မေတ္တာတရားကသာလျှင် ခိုင်မြဲပြီး သင့်ကို နွေးထွေး လုံခြုံမှုကိုပေးစေနိုင်တယ် ။
Mother's love အား ဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:33 PM6comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:25 PM No comments:
လယ်သမားတစ်ယောက်က တစ်နေ့မှာ သူ့ပြောင်းခင်းကို ငှက်ဆိုးတွေ ၀င်ရောက်ဖျက် ဆီးသွားတာ ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ ဒါကြောင့် သူက နောက်တစ်ရက်မှာ ငှက်ဆိုးတွေကို ဖမ်းဆီးသုတ်သင်ဖို့ အ တွက် ထောင်ချောက်ပိုက်ကွန်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ် ။
ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ သူထောင်ခဲ့တဲ့ပိုက်ကွန်ထဲမှာ ငှက်ဆိုးတွေနဲ့အတူ ငှက်ကျား တစ်ကောင် ကို ဖမ်းမိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ သူ့ကို တွေ့တဲ့အခါ ငှက်ကျားကပြောတယ် ။
“ ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်ပေးပါဗျာ ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော်က ရိုးသားတဲ့ငှက်ကျားတစ်ကောင်ပါ ခင်ဗျား ရဲ့ပြောင်းခင်းကိုလည်း မဖျက်ဆီးခဲ့သလို ခင်ဗျားကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာ အကျိုးစီးပွား ပျက်စေတာ ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး ” ဆိုပြီးသနားစဖွယ်တောင်းပန်တယ် ။
ဒါပေမယ့် လယ်သမားက လွှတ်မပေးပဲ ငှက်တွေအကုန်လုံးနဲ့အတူ ငှက်ကျား ကိုပါ ရောပြီး ချည်နှောင်ပြီးပြော လိုက်တယ် ။
“ မင်းပြောတာတွေအားလုံးက မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် မင်းကို ငါ့ပြောင်းခင်းတွေ ဖျက်ဆီးတဲ့ ငှက်ဆိုးတွေနဲ့ အတူ ဖမ်းမိခဲ့တယ် ဒီအတွက်ကြောင့် မင်းဟာ မင်းရောက်ရှိနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကျိုးအပစ်အားလုံးကိုခံစားရလိမ့်မယ် ”
မှန်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း အဖွဲ့အစည်း ဆိုတဲ့ လူမှုပတ် ၀န်းကျင်တစ်ခုထဲမှာ နေထိုင်နေကြရတယ် ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကောင်းအဆိုး အကျိုးအပစ်အားလုံးကို အများနဲ့တန်းတူ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် ။
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရိုးသားပေမယ့် လူဆိုးတွေကြားထဲမှာ နေရင် ကိုယ့်ကိုလည်းလူဆိုးလို့ အထင်ခံ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုရမယ် ။
The Farmer and the birds အား ဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:57 PM3comments:
တွေးမိတွေးရာ ရေးသည် ။ ထပ်တွေးမိက ထပ်ရေြး့ဖစ်ပါဦးမည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:15 PM9comments:
(Facebook မှာဖတ်ချင်ရင် တော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ် ။
ရာသီဥတုကတော့ ရန်ကုန်နဲ့မခြား နေ့လည်ဖက်မှာ ပူလှပေမယ့် ညနေခင်းအချိန်မှာတော့ ဧရာဝတီဖက်က တိုက်ခတ်လာတဲ့ မိုးနံ့သင်းတဲ့ လေနုအေးတွေကြောင့် နေလို့ ကောင်းလှပါတယ် ။ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကိုသက်တန့်တစ်ယောက် ပြည်မြို့ကို တခဏတာ ရောက်ရှိခဲ့တယ် ။ နေ့လည် ၂ နာရီလောက်ရောက်ပြီး Lucky Dragon Hotel မှာပဲ တည်းခိုခဲ့တယ် ။ ရှေ့မှာ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးရှိတာကြောင့် အရမ်းကို သာယာလှပတဲ့ ပြည်မြို့လေးပါပဲ ။
ခဏတဖြုတ်နားပြီး လမ်းရှည်လမ်းနဲ့ တရုတ်တန်းထောင့်က နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ဆန်လှော်မုန့်ဟင်းခါး သွားစား ခဲ့တယ် ။ အရသာက ရန်ကုန်နဲ့သိပ်မတူပဲ စားလို့ကောင်းမွန်ပြီး ငှက်ပျောအူဖတ်တွေများများ ထည့်ပေးတာတွေ့ရတယ် ။
မုန့်ဟင်းခါးစားပြီးတာနဲ့ ရုံးကလူတွေက ဟိုတယ်ပြန်မပို့သေးပဲ သုံးရာသီ ဆိုင်မှာ ရေခဲသုပ် လိုက်ကျွေး ပါသေးတယ် ။ အီဆိမ့်နေပြီး အုန်းသီးဖတ်တွေနဲ့မို့ အလွန်ကို အရသာ ရှိလှပါတယ် ။
ပြီးတာနဲ့ ဟိုတယ်ပြန် ရေမိုးချိုးပြီး ညနေစောင်း ၅ နာရီခွဲလောက် မှာ ပြည်မြို့ တစ်ဖက်ကမ်း က ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ် ။ ဧရာဝတီမြစ်ကိုဖြတ်ထားတဲ့ န၀ဒေးတံ တားဂိတ်ရောက်တော့ ဘုရားဖူးသွားမယ့်ဆိုင်ကယ်တွေကို တံတားဖြတ်ခ မကောက်ပဲ ဖြတ်သန်း ခွင့်ပေး တာတွေ့ရပါတယ် ။
တံတားပေါ်ရောက်တဲ့အခါ မြစ်အလယ်ခေါင်လောက်အထိ သောင်တွေထွန်းနေတဲ့ ဧရာဝတီကို ဓါတ်ပုံရိုက် ယူခဲ့တယ် ။ လေကတအားတိုက်တာကြောင့် ကင်မရာမကိုင်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။ မိုးကလည်း ညို့လာပြီး မိုးဖွဲဖွဲတွေ စတင် ရွာသွန်းလာပါပြီ ။ တောင်ပတ်လမ်းရောက်တဲ့အခါ ရှေ့မှာ ဘာမှ မမြင်တော့လောက်အောင် သောင်ပေါ်က သဲတွေကို လေတွေကတိုက်ပြီး အရာရာကို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ် ။ ဆိုင်ကယ်စီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပြည်မြို့သားတွေကတော့ အေးဆေးပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ့ ရွှေဘုံသာ မုနိဘုရားကြီး ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
ဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်ခဲ့တယ် ။ ဘေးက လူတွေကတော့ ရုံးအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဘုရားဖူးပြီးတဲ့အခါ ညနေလည်းမှောင်နေပြီမို့ ပြည်မြို့ထဲကို ၀င်လာခဲ့တယ် ။
ပြီးတော့ ရွှေဆံတော် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ပါတယ် ။
စေတီတော်ကို ၀န်းရံထားတဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ ဒီလို ထူးခြားတဲ့ တည်ဆောက်မှုတွေကို ဒီဘုရားကြီးမှာ ပဲတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။
ရွှေဆံတော်စေတီတော်ကို တခြားစေတီတွေနဲ့မတူပဲ ထီးတော် ၂ ဆင့်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်းအပေါ်ဆုံးထီး ကတော့ မြန်မာထီးဖြစ်ပြီး အောက်ထီးကတော့ မွန်ထီးဖြစ်ပါတယ် ။ ရွှေဆံတော်စေ တီမှာ ပဲ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။
ဒီဘုရားကတော့ ရွှေဆံတော်စေတီပေါ်ကနေဖူးမျှော်ရတဲ့ ဆယ်ထပ်ကြီးဘုရားဖြစ်ပါတယ် ။ အလွန်ကို ကြည်ညိုဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ဆင်းတုတော်ဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ Lucky Dragon Hotel မှာပဲ GP Section မှာ ဆရာဝန်တွေနဲ့ product presentation ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ပြည်မြို့ဟာ နေလို့ကောင်းတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပါပဲ ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ တစ်ခုလေးပဲ ပြောစ ရာရှိခဲ့ တယ် ။ အဲဒါကတော့ လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်မလာပဲ ဆယ်မိနစ်တစ်ကြိမ်လောက်ပျက်ခြင်းပါပဲ ။ ဒီတော့စဉ်းစား မိတာ ရင်းနှီမြုပ်နှံသူတွေနဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလုပ်ရတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအဖို့ အခက်တွေ့နိုင် တယ်ဆိုတာပါပဲ ။ လျှပ်စစ်မီးလေးသာ ပုံမှန်ပြန်မှန်ခဲ့ရင် နေချင့်စဖွယ်မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဟိုတယ်တွေ ကလည်း သပ်ရပ်ကောင်းမွန်ပြီး ကမ်းနားလမ်းနဲ့ ပနာသင့်တာကြောင့် စာဖတ်သူများကို တစ်ခါတစ်ခေါက် အရောက်သွားလို့ ဘုရားလည်းဖူးရင်း ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကိုလည်း View point ကနေသွားရောက်ရှူစားကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်းအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 5:41 PM 8 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:02 PM 11 comments:
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး အရောင်ပြောင်းတတ်တဲ့သတ္တ၀ါများ (၂)
ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနက တင်ဆက်ထားတဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားအစီအစဉ်မှာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင်ကလိုက်ပြီးအရောင်ပြောင်းတတ်တဲ့သတ္တ၀ါတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေ နဲ့လိုက်လျော ညီထွေရှိလွန်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ဟာ ဆင်တူလွန်းတာမို့ အမှတ်တမဲ့ဆို ရင် မသိ သာလှ ပါဘူး ။ အန္တရာယ်တွေကနေ ရှောင်လွှားနိုင်အောင် သဘာဝကနေပေးအပ်ထားတဲ့ ထူးခြား သတ္တ၀ါတွေ ရဲ့အစွမ်းသတ္တိဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:46 PM7comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 3:30 PM 8 comments:
ဒီနေ့ မနက်ကတည်းက အမေနေ့ အတွက် တစ်ခုခုရေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ အခုမှ ကွန်နက်ရှင်လေးရတုန်း အမေနေ့အတွက် တွေးမိတာလေးတွေ ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁ ။ သားသမီးတွေဟာ အချိန်တန်လူလားမြောက် အတောင်အလက်တွေစုံလင်ရင် အမေ့ရင်ခွင် စုံကန်ပြီး ထွက် သွားကြပေမယ့် ရင်မနာနိုင်ပဲ သားသမီးအတွက် ခလုတ်မထိဆူးမညိပါစေနဲ့ ဆုတောင်းပေးသူဟာ အမေပါ ။
၂ ။ ဖ၀ါးလက်နှစ်လုံးပခုံးလက်နှစ်သစ်အရွယ်ကတည်းက ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ပေမယ့် အိုမင်းသွား တဲ့အ ခါ ငါ့ကိုပြန်ပြီး ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ကြပါလို့ မပြောရက်သူဟာ အမေပါ ။
၃ ။ လိမ္မာတဲ့ သားသမီးတွေထက် ဆိုးမိုက်တဲ့သားသမီးတွေကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့မှားယွင်းပါတယ် ။ သားသမီးအပေါ်အမေထားတဲ့မေတ္တာဟာ ဘယ်သူ့ကိုပိုတယ် ဘယ်သူ့ကိုလိုတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လိမ္မာတဲ့ သားသမီးက လူ့လောကမှာဖြတ်သန်းဖို့ စိတ်ချရပေမယ့် ဆိုးသွမ်းတဲ့ သားသမီး ဘေးမ သီရန်မခ ရအောင် စိုးရိမ်ပူပန်ပေးသူကတော့အမေပါပဲ ။
၄ ။ သားမိုက်သောက်ဖို့အတွက် အရက်ငါးဆယ်ဖိုး ပဲပြုတ်သုတ်ကလေးနဲ့ အမြဲစီမံပေးတတ်ပြီး သားမိုက်မူး ရူးအိပ်ပျော် သွားတဲ့အခါ “ လူကလေးရဲ့အိပ်ချိန်တန်ဗျိုင်းရှေ့ကပြန် ” ဆိုပြီး ချော့သိပ်ပေးတတ်သူဟာလည်း အမေပါ ။
၅ ။ သားသမီးတွေက သာ အမေ့လက်ကို လွှတ်ချခဲ့ကြပြီး တနယ်တကျေး အိမ်ထောင်ရပ်သားကျ ထွက်ခွာ သွားတတ်ကြပေမယ့် အမေကတော့ သားသမီးတွေလက်ကို ဘယ်တော့မှလွှတ်မချဘူး ။
၆ ။ မီးတွင်းထဲမှာ ဆရာဝန်ကမေးတယ် ။ “ မိခင်အသက်နဲ့ကလေးအသက်ဘယ်ဟာယူမလဲ ” ဆိုတဲ့အခါ “ သားလေးအသက်ကိုပဲ ကယ်ပေးပါ ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသေခံ လို့ မေတ္တာကြီးမားတတတ်သူဟာ အမေပါ ။
၇ ။ ဘယ်လောက်ပဲ စော်ကားစော်ကား မျက်ရည်လေးဝဲလို့ အဆုံးထိ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို ထားရှိနိုင်သူဟာ အမေပါ ။
၈ ။ သားသမီးတွေက ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ် အမေကတော့ဆင်းရဲတွင်းထဲနစ်လို့ - - လမ်းမှာတွေ့ ရင် သားသမီးသိက္ခာ ကျမှာစိုးလို့ သားရေ သမီးရေ လို့မခေါ်ရဲ မျက်ရည်ဝဲ အံကိုကြိတ် တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ခေါင်းငုံ့နေခဲ့သူဟာ အမေပါ ။
၉ ။ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ တစ်နေကုန် ဆင်းရဲ ပင်ပန်းကြီးစွာ ချွေးဒီးဒီကျ ပင်ပန်းနေပေမယ့်လည်း အိပ်ပြန်ရောက် လို့ သားသမီးငယ်ရဲ့ တွတ်တီးတွတ်တာ စကားသံလေးကြားရင် အမောပြေလို့ အပြုံးတွေဝေတတ်သူဟာ အမေပါ ။
၁၀ ။ လိုအပ်ရင်သားသမီးအတွက် မျက်လုံး ၊ ကျောက်ကပ် ၊ အသည်း စတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေသာမက သား သမီးကောင်းစားဖို့အရေး အသက်ကိုပါ ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုရင် နောက်မဆုတ်ပဲ ပေးဆပ်ဝံ့သူဟာ အမေပါ ။
သားသမီးများအားလုံး အမေနေ့မှာသာမကပဲ ကျန်တဲ့နေ့ရက်တွေအ ကုန်လုံးရဲ့ နေ့ရက်တိုင်း မိနစ်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း မှာလည်း အမေ့ ကို မစော်ကားမိကြပါစေနဲ့ ။ အမေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်သလို ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမေ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး ။ သားအမိ သမီးအမိဆိုတဲ့ တော်စပ်ဖို့ ကံတရား ပါလာကြလို့သာ သံယောဇဉ်ကြိုးကြီးမားစွာနဲ့ အမေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်တယ် ။
အသက်ရှိစဉ်မှာ အမေ့ကို နွေးထွေးစွာဆက်ဆံကြပါ ။ အမေလိုချင်တာ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးမဟုတ်ဘူး သင့်ရဲ့ ရာထူးမ ဟုတ်ဘူး သင်ဝယ်ပေးတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားစက် မဟုတ်ဘူး ။ အမေလိုချင်တာ သင့်ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ သားသမီးပီ သတဲ့ အပြုအမူလေးတစ်ခုပါပဲ ။ သင်ပေးတဲ့ ငွေးတစ်သိန်းထက် အမေ့ကိုသား ချစ်တယ်ဆို တဲ့စကားလေးနဲ့ ရင်ခွင်ကိုခေါင်းဝှေ့ကြည့်ကြစမ်းပါ ။အမေ ဘယ်လောက်ပျော်မြူးနေရှာမလဲ ။ ။
အသက်သေသွားမှ ငိုယို လို့ တမ်းတပြီး ပန်းစည်းတွေ သွားထားနေမယ့်အစား အသက်ရှိစဉ်မှာ အမေ့ ကို ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုစုလို့ အမေ့ကို ချော့သိပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါ ။ အမေစားချင်တဲ့အရာလေးတွေ ကျွေးလို့ အမေသွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေပို့ပေးကြပါ ။ အမေငိုခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်တွေကို သားသမီးရဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်နဲ့ ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါတယ် ။ ။
(သားသမီးများအားလုံးကိုယ်စား - - - )
Posted by သက်တန့်ချို at 9:19 PM9comments:
သတင်းမီဒီယာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားတဲ့ဆိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ မန်ဘာတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်သဘောကျ ကိုယ် ဘမ်းချင် တိုင်းဘမ်းတာကတော့ သေးသိမ်နုပ်လွန်းလှပါတယ် ။
“ Freedom News Group ရဲ့ Fan Member တစ်ယောက်ကို ဘမ်းချင်တိုင်းဘမ်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ရှံ့ချပါတယ် ”
စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ အောက်ပါလင့်လေးကို ၀ိုင်းပြီး Share လုပ်ပေးကြပါ ။ ဒါမှ စာဖတ်သူတွေကို လုပ်ချင် တိုင်းလုပ်နေတဲ့ ဘမ်းချင်တိုင်းဘမ်းနေတဲ့ Page တစ်ခုအကြောင်းလူတွေသိသွားမှာပါ ။ နောက်တစ်ခုက အပစ်မရှိ ပဲ မန်ဘာတစ်ယောက်ကို ဘမ်းတာ စာဖတ်သူအားလုံးကို စော်ကားတာလို့ ကျွန်တော်ယူဆထားတယ် ။
Freedom News ဆိုတာ လွတ်လပ်သော သတင်းများ လို့ ရည်ညွှန်းတယ်မဟုတ်လား လွတ်လွတ် လပ်လပ်တောင် မှတ်ချက်ရေးခွင့်မပေးတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုရဲ့ သဘောထားကို လူတွေသိသွားဖို့လိုပါတယ် ။ ဘလော့ ဆို ရင်တော့ Personal မို့ဘာမှမပြောလိုပါဘူး ။ ကိုယ်ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ ။ သတင်းမီဒီယာပုံစံ မျိုး ဖေ့ ဘုတ် မှာ ဖန်ပေ့ခ်ျလုပ်ထားတဲ့ဆိုက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ အထက်ပါလုပ် ရပ်ဟာ သေးသိမ် လွန်း အားကြီး ပါ တယ် ။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါဖေ့ဘုတ်လင့်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ။
အထက်ပါလင့်လေးကို Share လုပ်ပေးကြပါ ။ Please share all my readers !!
မေ - ၁၂ ၊ ၂၀၁၂
ဖခင်တစ်ယောက်နဲ့သားဖြစ်သူကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ တောင်တစ်လုံးအပေါ်မှာ အတူလမ်းလျှောက် လာကြ တယ် ။ ရုတ်တရက်ပဲ ကောင်လေး ချော်လဲသွားပြီး နာကျင်လွန်းလို့ညည်းလိုက်တယ် ။ “ အ....အ............”
ကောင်လေး ကအံ့သြသွားတယ် ။ သူ့အသံကို ထပ်ခါထပ်ခါသူပြန်ကြားလိုက်ရတယ် ။ တောင်နံရံတ၀ှိုက်ကနေပြီး “ အ...အ..............” ဆိုတဲ့အသံပါပဲ ။
စပ်စုလိုစိတ်နဲ့ကောင်လေးက အော်လိုက်တယ် ။ “ မင်းဘယ်သူလဲ ”
ကောင်လေးအဖြေပြန်ကြားလိုက်ရတယ် ။ “ မင်းဘယ်သူလဲ ”
ကောင်လေးက တောင်ကိုကြည့်ပြီး ထပ်အော်ပြောတယ် ။ “ ငါမင်းကိုပြောနေတယ်နော် ”
ကောင်လေးအဖြေပြန်ကြားလိုက်ရတယ် ။ “ ငါမင်းကိုပြောနေတယ်နော် ”
ကောင်လေးက ဒေါသထွက်သွားပြီး ထပ်ပြောတယ် ။ “ ငကြောက် !! ”
အဲဒီအခါ အဖြေကိုပြန်ကြားရပြန်တယ် ။ “ “ ငကြောက် !! ”
ကောင်လေးက သူ့အဖေကို ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ် ။ “ အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲဟင် ”
သူ့အဖေကပြုံးလိုက်ပြီး ပြောတယ် ။ “ ငါ့သား နားထောင်နော် ”
ဖခင်ဖြစ်သူက အော်ပြောလိုက်တယ် ။ “ မင်းဟာ ချန်ပီယံပဲ ”
တောင်နံရံတွေက ပြန်ဖြေတယ် ။ “ မင်းဟာ ချန်ပီယံပဲ ”
ကောင်လေးအံ့အားသင့်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့်နားမလည်သေးပါဘူး ။ အဖေဖြစ်သူကရှင်းပြတယ် ။
“ လူတွေက ဒါကို Echo အဲခိုး (ပဲ့တင်သံ ) လို့ခေါ်ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ့်ဘ၀မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ သားလုပ်သမျှ သားပြောသမျှ ဟာ သားဆီကို ပြန်လာလိမ့်မယ် တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာ ရိုးရှင်းလှပါတယ် လုပ်သမျှ အပြုအမှုတွေက ပဲ့တင်သံလို ကိုယ့်ဆီပြန်လာမှာပဲ
အကယ်၍ သားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် သားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို များများ ထည့်ထားပါ အကယ်၍သားက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ကိုယ်တည်ဆောက်ပါ ဒီဆက်နွယ်မှုဟာ အရာရာတိုင်းမှာ အသုံးချလို့ရတယ်သားရဲ့ ဘ၀ရဲ့စစ် မှန်တဲ့ အနှစ်သာရတစ်ခုပဲ ”
ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ နဲ့တစ်ထပ်တည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး ။ သင့်ရဲ့ ပဲ့တင်သံ သင့်ရဲ့ ကြေးမုံတစ်ခုသာဖြစ်တယ် ။ သင်လုပ်သမျှ သင်ပြောသမျှ သင့်ထံပြန်ရောက်မှာ ဖြစ်သလို သင်ပြုမှု သမျှ ကို သင်ပြန်ရရှိမှာဖြစ်တယ် ။
Mountain story အားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:56 AM2comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 5:07 PM6comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 3:36 PM No comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:31 PM6comments: